Saturday September 02, 2017 - 18:56:50 in Maqaallo by XA_Wararka Caynaba News
Golaha Wakiilada Somaliland ayaa ahaa golaha ugu fadhiidsan ee Somaliland uguna hogaanka liitay. Waxgaradka Somaliland ayaa
ilaa intii Golaha la doortay mudo yar ka bacdi markasta ka dayrin jiray sida ay umadu ugu khasaartay. Aqoon darida, karti la’aanta iyo hogaan xumada laba iyo tobankii sano haysay; waata keentay manta inay bulshada kula soo dhexdhacaan waxayna ka gayin – inay nolasha nabdgalyo ku ceeshka ah ka ciideeyan. 78 cod baanu tirsan kari waynay wax laga yeeli karo ma aha. Waa gole qaranka u tudhayn – tani waxay ka dhiganayaan tababar dholatuseed ay Waddani doorashada maddaxtinimada ugu diyaar garoobayaan . Miyaanay ahayn mid ay manta dadku iyaga la yaaban yihiin aqoon darooda iyo fadhiidnimadooda?